Home Wararka MW Farmaajo oo dacawad ka dhan ah Ismacil C. Geele u gudbiyay...
MW Farmaajo oo dacawad ka dhan ah Ismacil C. Geele u gudbiyay Abiy Axmad
Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa uu ku eedeeyay Madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele in uu ka shaqeynayo burburinta Dowlada Soomaaliya. Eedaynta uu soo jeediyay MW Farmaajo ayaa ka danbeeysay ka dib markii Dowlada Jabuuti ay sanadkan ay markii labaad martigalinayso shir looga hadlayo isbadalka ka socda geeska Africa iyo sida uu u saaameynayo qoowmiyadda Soomaalida.
MW Faramaajo oo la joogo Madaxweynaha Eritereeya ayaa waxa xalay qadka teelafanka kula hadleen Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya kaas oo uu MW Farmaajo ku codsaday in uu RW Abiy Axmad uu la hadlo MW Geelo qabashada shirkana la joojoyo.
Isla xalay ayuu RW Abiy Axmad waxa uu qadka taleefanka uu ka soo wacay MW Ismaaciil Cumar Geele isaga oo u u gudbiyay cabashada MW Farmaajo ee ku aadan shirka berito ka furmayo Jabuuti. MW Geele ayaa aad uga xumaaday in Farmaajo uu waco Abiy Axmad iyaga oo toos u wada hadlikaray. Geele ayaa u sheegay RW Abiy Axmad in shirkaan yahay shir sanadle ah loogana hadlayo qoomiyada Soomaalida. Waxaana uu sheegay in Dowlada Jabuuti ayan marnaba duminaynin dowlad ay ayada wax ka soo dhistay.
Waxaa nasiib xumo in MW Farmaajo kaalmo ka raadinayo Itoobiya iyo Eritereeya halka uu hogaanka ka qaadan lahaa sari u qaadida Soomaalinimada.
Previous articleSoomaali lagu dilay Dalka Sacuudigga!!
Next articleGudiga Doorashada KG oo iscasilay iyo ciidanka Itoobiya oo sheegay in amnigooda balan qadayaan